R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Gaas oo beesha caalamka ka dalbaday gargaar deg deg ah, lana wareegay deeq ka timid Umaaraadka Carabta. – Radio Daljir
R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Gaas oo beesha caalamka ka dalbaday gargaar deg deg ah, lana wareegay deeq ka timid Umaaraadka Carabta.
Muqdisho, June 29 – R/wasaaraha dawladda federaal KMG ah ee Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbaday in si dhakhsiyo ah gargaar loola soo gaaro dadka ku barakacay dagaallada Soomaaliya iyo abaaraha baahsan ee ka jira meelo badan oo dalka ah.
R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiwali Maxamed Gaas, ayaa sheegay dad fara badani in ay la dabaalaysan yihiin dhibaatooyinka ka dhashay dagaallada joogsan waayey ee Soomaaliya iyo abaaraha daba-dheeraaday ee wali ka jira gobollo badan oo dalka ah, kuwaasi oo sababay dad badani in ay magaalooyinka ku soo jabaan kaddib markii xoolihii ka dhammaadeen.
R/wasaaruhu, waxaa adduunka ka codsay in gacan weyn loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee aadka u taagta daran, kuwaasi oo uu sheegay in ay ku kala firirsan yihiin dhammaanba gobollada dalka ayna u baahan yihiin gargaaro bini’aadanimo, sidaas darteedna beesha caalamka looga fadhiyo taakulaynta iyo taaban-taabinta ku aaddan dadka dhibaataysan.
Prof. Cabdiweli Maxamed Gaas, ayaa hadalkaan ka jeediyey xilli uu ku sugnaa dekedda magaalada Muqdisho halkaasi oo uu kula wareegay deeq gargaar ah oo dawladda imaaradka carabtu ugu deeqday ummadda Soomaaliyeed ee muddada dheer la daalaa-dhacaysay dhibaatada amni xumo, iskuguna jirtay raashin, dhar iyo gaadiid.
R/wasaaruhu waxaa uu dhinaca kale maalqabeennada Soomaalidu ugu baaqay in ay taakuleeyeen dadkooda taagta daran lana garab is-taagan mucaawino dhanwalba ah si looga samata-bixiyo dhibaatada ku habsaday.